October 8, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन शाहस उर्जाको शेयर पर्ने कान्छी पाल्पाली चेली !
पाल्पा । पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा युवा पुस्ता मात्र नभई बृद्ध बृद्दा , केटाकेटी सबैको उत्तिकै चासो रहेको देखिन्छ । दैनिक हजारौ संख्यामा डिमाट खाता खोल्नेको संख्या बडेको पाइन्छ । कुनै कम्पनिले सर्बसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्दा सोही दिन नै मागभन्दा बढी आबेदन पर्ने गरेको छ भने यसै क्रममा पछिल्लो समयमा साहस उर्जा कम्पनी लिमिटेडले […]
October 8, 2021 N88LeaveaComment on म सँग रात बि’ताउन आएको युवा मेरो स्त’न्पान गरेर फर्कियो ! पूरा पढ्नुहोस
सुनिता दनुवार एक पटक एउटा अ नौंठो घ टना भयो । सायद को’ठीहरुमा अप’वादका रुपमा हुने घ टना । एकपटक हाम्रो बंगलामा मो जम स्तीका लागि कलेजका केही केटाहरु आएका थिए । ती केटाहरु आ आफुले म न प राएका केटीहरु बोकेर कोठामा गए । ती मध्येकै एउटा केटाले मलाई राज्यो र मेरो कोठामा आयो […]
महिनावारी रोक्ने औषधि खानु कत्तिको हानिकारक ?
October 8, 2021 N88LeaveaComment on महिनावारी रोक्ने औषधि खानु कत्तिको हानिकारक ?
काठमाडौँ । पुजा आजा तथा टाढा यात्रा गर्नु लगाएतका कारण महिलाहरुले महिनावारी रोक्ने औषधि प्रयोग गर्ने गर्दछ । यस्तै कारणले गर्दा महिलाहरुले चिकित्सकको परामर्श बिना नै महिनावारी रोक्ने औषधि प्रयोग गर्ने गरेको पाईनछ । तर, यो औषधि महिला स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुदैन भन्नेखवर पनि आईरहेका छन् । महिनावारी रोक्ने औषधी महिलाहरुको लागी हानिकारक हुने थाहा […]
यी ६ चिज घरमा राख्नुहोस् कहिल्यै पनि हुँदैन धनको कमी !
October 8, 2021 N88LeaveaComment on यी ६ चिज घरमा राख्नुहोस् कहिल्यै पनि हुँदैन धनको कमी !
घरमा पैसाको अभावले तनाव पैदा गर्छ । कतिपय ब्यक्तिलाई अत्याधिक मेहनत गर्दा पनि पैसा हात लाग्दैन । यस्तो वास्तु दोषका कारण हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । वास्तु शास्त्रका अनुसार घरमा केही बस्तुलाई राख्दा धनको अभाव हुँदैन । शास्त्रअनुसार घरमा यी ६ कुरा राख्दा धनको अभाव हुँदैनः – माटोको घडा घरमा माटोको घडा राख्नुस् । […]
October 8, 2021 N88LeaveaComment on १२ कक्षाका युवकले बनाए बाँसको मोवाइल ट्रायपड
एजेन्सी। प्रत्येक मानिसमा एक न एक क्षमता हुन्छ । कसैको बाहिर देखिन्छ भने कसैमा लुकेको प्रतिभा हुन्छ । पन्जाबमा एक युवकले बाँसबाट मोबाइलको लागि ट्रायपड बनाएका छन् । १२ कक्षा सम्म पढेका रोमेशलाई पहिलेदेखि नै बाँसको क्राफ्ट बनाउने निकै शोख थियो । उनले आफैले बनाएको क्राफ्टको भिडियो आफ्नै युट्वब च्यानलमा अपलोड गरीरहेका हुन्छन् । उनले […]
एजेन्सी । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको छ । भाइरस नियन्त्रण गर्न धेरै राष्ट्रहरुले लकडाउन गरेका थिए । लामो समय लकडाउन हुँदा केही आश्चर्यलाग्दा घटनाहरु पनि भएका छन् । चीनमा पछिल्लो केही समय यता सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या अत्यधिक बढीरहेको छ । लकडाउनमा पति र पत्नी एकैसाथ धेरै लामो समय बिताउन गाह्रो परेको […]
काठमाडौँ । मन्त्री पद पाउने आशमा रातदिन माधव नेपालको प्रशंसा गर्दै आएका मेटमणि चौधरीमाथि ठूलो ब’ज्रपात भएको छ । नेकपा एमाले विभाजन गर्न र त्यस पछि पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली वि’रुद्ध हात धोएर लागेका र एस पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई दरो साथ दिएका मेटमणी चौधरीको मुखैमा आएको मन्त्री पद खोसिएको हो । हिजो सम्म […]
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्ततः गैरसांसद्लाई पनि मन्त्री बनाएका छन् । संविधानको मूल मर्मविपरीत देउवाले नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान हुन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा विचौलियाका रुपमा रहेका दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । तर, उनको नाममा विवाद भएपछि […]
October 8, 2021 N88LeaveaComment on मेटमणीकाे मन्त्री बन्ने सपना चक्काचुर भएपछि …. दिए यस्ताे प्रतिक्रिया
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले राजनीतिक खेलाडीका लागि मन्त्री पद गौण हुने बताएका छन् । शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत चौधरीले दीर्घकालीन चेत राखेर राजनीतिको खुल्ला चौरमा प्रवेश गरेको राजनैतिक खेलाडीको लागि मन्त्री पद गौण विषय भएको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘को मन्त्री बन्नु भयो ? को मन्त्री हुनु भएन ! मुख्य […]